ABUL-CAAS BINU RABIIC AL-ANSAARI
Rasuulka (scw) markii uu u hijrooday magaalada Maddiina, arrinkiisana uu darraaday, ayaa qureysh soo baxday iyadoo dooneysa la dagalaallanka Rasuulka (scw) iyo Asxaabtiisa. Abul-Caas wuxuu si aan qasad ahayn uga qayb galay dagaalkii Badar, isagoo la safan dhinaca gaalada. Hase yeeshee ma jirin jaceyl uu jeclaa in uu la dagaallamo Muslimiinta, laakiin darajada uu tolkiisa ka joogay ayaa ku kelliftay in uu ka qayb galo dagaalkaas.
Dagaalkii Badar natiijadii ka soo baxday waxay noqotay in qureysh (gaalada) lagu jabiyo, madaxdii kufrigana laga takhalluso, qaar iyaga ka mid ah waa la laayay, qaarna waa la qafaashay, qaarkii kalena waxay ku badbaadeyn carar. Kuwii la soo qabqabtay oo la soo qafaashay waxaa ku jiray Abul-Caas oo qabay gabadhii Nebiga (scw) uu dhalay ee ahayd Zeynaba. Rasuulka (scw) wuxuu ku waajibiyay dadkii gaalada ahaa ee la soo qab qabtay in ay bixiyaan oo ay isku furtaan lacag, lacagtaasoo u dhaxeysa Kun ilaa Afar kun oo Dirham, iyadoo loo eegayo xaaladahooda hanti iyo reereed. Ergadii ka kala socotay dadkaas waxay bilaabeen in ay u dhaxeeyaan Magaalada Makka iyo Madiina, iyagoo sida maalkii ay ku soo furan lahaayeen dadkooda. Haddaba Zeynaba ayaa soo dirtay maalkii ay ku furaneysay ninkeeda Abul-Caas, iyadoo furasho ahaan u soo dirtay Kuul ay u hadiyeesay hooyadeed Khadiija maalintii ay aroosaneysay.
Markii uu Rasuulka (scw) arkay kuushii waxaa dabooshay Murugo, wuuna u jilcay gabadhiisa isagoo eegay xaggaa iyo asxaabta wuxuuna yiri "Maalkan waxaa soo dirtay Zeynaba iyadoo rabta inay ku furato Abul-Caas, ee ka warama haddii aad u aragtaan in aan u sii deyno Abul-Caas, una celinno maalkeeda waad sameyn kartaan". Saxaabadii ayaa waxay yiraahdeen "Haa, waana ra’yi wanaagsan Rasuulkii alloow". Hase yeeshee Rasuulka (scw) wuxuu Abul-Caas ku xiray sii deyntiisa in uu u soo diro gabadhiisa Zeynaba isagoo aan dib dhicin. Abul-Caas markii uu tagay Magaaladii Makka, wuxuu si dhaqso ah u billaabay in uu fuliyo ballankii. Wuxuu amray xaaskiisa Zeynaba in ay u diyaar garowdo Safar, wuxuuna u sheegay in Ergadii aabaheed ay ku sugayaan meel aan ka fogeyn Magaalada Makka, isagoo u diyaariyay sahaydaydii safarka iyo ninkii raaci lahaa oo ahaa walaalkiis Camar Binu Rabiic.
Camar Binu Rabiic ayaa soo baxay maalin cad, isagoo wada gabadhii Zeynaba, qureyshna ay arkeyso markaas ayeey waxay soo daba galeen Camar iyagoo cabsi gelinaya Zeynaba ilaa ay kaga soo dhowaadeen. Camar ayaa soo baxsaday fallaartiisa, isagoo leh "Wallaahi ruuxii xaggeyga u soo dhowaada waxaan qoorta kaga ganayaa fallaarta", wuxuuna aad u yiqiinay fallaar ganidda. Abuu-Sufyaan Binu Xarbi ayaa soo aaday xagga Camar, wuxuuna ku yiri "Adeer naga leexi fallaartaada ilaa aan kaala hadalno". Camar wuu ka yeelay. Abul-Caas ayaa Camar ku yiri "Camaroow kuma saxsanid falka aad sameynayso, waxaad waddaa iyadoo dadkoo dhan ku arkayaan Zeynaba, waadna ogtahay Carab khasaarihii kaga soo gaaray Muxammad, haddii aad kaxeyso gabadha qabaa’ilka carab oo dhan waxay nagu sheegayaan inaan fuley nahay, waxayna nagu tilmaamayaan dulli iyo wax ma garato, ee ka waran haddii aad u celiso gabadhaan gurigeeda, ilaa ay ka iloobaan dadka oo markaas si sir ah aad u kaxeysatid, markaasna aad u geysid aabaheed, waayoo wax dan ah aan ka leenahay heynteeda ayaan jirin".
Camar sidaas ayuu raalli ku noqday, wuxuuna Zeynaba u celiyay Makka. Muddo yar ka dibna wuxuu sameeyay sidii uu Abuu Sufyaan u sheegay, oo wuxuu soo kaxeeyay Zeynaba, wuxuuna gacanta u geliyay ergadii sugeysay. Abul-Caas wuxuu intaa ka dib iska joogay magaalada Makka ilaa ay ka soo dhowaatay furashadii Makka. Abul-Caas sidii ay caadadiisu ahayd wuxuu si ganacsi ahaan u soo qabatimay Shaam, markii uu soo dhammeystay dantii ganacsi, ayaa wuxuu u soo anbabaxay inuu u soo laabto magaaladii Makka.
Abul-Caas isagoo wata safar gaaraya ilaa 100 halaad, ayna waheliyaan shaqaalihiisii dhamaa ilaa 170 nin ayaa waxaa u soo anbabaxay ilaalo ka mid ahaa ilaaladii Rasuulka (scw) oo aan markaa ka fogeyn magaalada Maddiina. Safarkii way qabsadeen, ragiina way qafaasheen. Hase yeeshee Abul-Caas wuu ka badbaaday oo lama qaban isaga. Markii la gaaray habeenkii ayaa Abul-Caas soo galay magaalada Maddiina isagoo cabsanaya. Wuxuu u tagay xaaskiisii Zeynaba, isagoo weydiistay magangalyo. deedna way magangelisayKolkii Rasuulka (scw) u soo baxay Salaaddii Fajar, xirtayna salaaddii isagoo takbiirsaday, saxaabadiina ay la takbiirsadeen, ayaa waxaa safka dumarka ka dhex qaylisay Zeynaba iyadoo Dumarka ka dhex dhawaaqday Zetnaba iyadoo leh "Dadyahoow waxaan ahay Zeynaba Bintu Muxammad, waxaan magangaliyay Abul-Caas ee idinkana magangaliya".
Rasuulka (scw) markii uu dhammeeyay Salaadda ayaa wuxuu u jileecay xaggaa iyo saxaabada isagoo leh "Ma maqasheen wixii aan anigu maqlay?". Saxaabadii ayaa yiri "Haa, Rasuulkii Alloow". Intaa dabadeedna wuxuu yiri Rasuulka "Allaha nafteyda ay gacantiisu ku jirtaan ku dhaartayee waxna kama ogi arrinkan, ilaa aan ka maqlay wixii hadda aad maqlaysayn, Muslimiintana waxaa wax magangaliya kuwooda ugu sokeeya", kaddibna wuxuu aaday gurigiisa , wuxuuna ku yiri gabadhiisa "Wanaaji hoyga Abul-Caas, waxaadna ogaataa in uusan xalaal kuu ahayn. Wax ka yar ka dib Rasuulka (scw) wuxuu u yeeray ilaaladii soo qabqabtay raggii la socday Abul-Caas iyaga iyo maalkooda, wuxuuna ka dalbay Saxaabada in ay wanaajiyaan, isla markasna u celiyaan maalkiisa iyo saafarkiisa, iyagoo xaq u leh inay diidi karaan, waayoo waa wax ay xaq u leeyihiin.
Saxaabadii arrinkaas way ka ogalaadeen Rasuulka (scw), waxayna uyiraahdeen "Waan u celinaynaa maalkiisa" Abul-Caas markii uu yimi isagoo doonaya inuu qaato maalkiisa ayaa qaar Saxaabada ka mid ahi ku yiraahdeen "Abul-Caas wuxuu ku noqday magaalada Makka, wuxuuna siiyay dadkii amaanadii iyo maalkii ay u dhiibteen, isagoo leh "Qureeshey ma jiraan qof aan helin maalkiisa.".. Waxay yiraahdeen maya, Ilaahna ha kaa abaalmariyo. Abul-Caas ayaa yiri intaa ka dib "Haddaba haddii aan idiin guday xuquuqdii aad igu laheedeen, waxaan qirayaa inuu Ilaah xaq yahay, Nebi Muxammadna yahay Rasuulkii Alle soo diray, mana iga reebin inaan Muxammad agtiisa ku islaamo aan ahayn cabsida aan ka cabsanayay inaad u qaadataan inaan maalkiina la caray ama boobay.. Lakiin markii aan idiin soo celiyay maalkiina, aana madax banaanaadey ayaan Islaamay". Intaa ka dib Abul-Caas wuxuu ku soo laabtay Rasuulka (scw), Rasuulkana wuxuu wanaajiyay marti gelintiisa, wuxuuna u celiyay xaaskiisa, isagoo oran jiray "Abul-Caas wuu ii waramay runna wuu ii sheegay, wuu ila ballamay wuuna oofiyay.
Daabacaad: Isniin April 24, 2000